Nemizuzu yonke yemihla, amehlo emazulwini aphakanyiswe kwi-orbit ye-arhente yendawo yehlabathi ehlola iplanethi yethu kunye nomoya wayo. Banikeza umgca wenkcazelo rhoqo kwizinto ezivela emoyeni nasemhlabeni oshisa kumgangatho wokunyusa, iinkqubo zefu, imiphumo yokungcola, imililo, icebo leqhwa nekhephu, ubungakanani be-ice cream, iinguqu ezitshintshayo, ukuguquka kolwandle kunye nokuba ioli kunye negesi ichithelwa kuwo umhlaba kunye nolwandle.
Idata yabo edibeneyo isetyenziswa ngeendlela ezininzi. Sonke siqhelana neengxelo zemozulu zemihla ngemihla, ezisekelwe kwinxalenye yesithombe se-satellite kunye nedatha. Ngubani phakathi kwethu ongakhange ahlolisise imozulu ngaphambi kokuba asebenze eofisini okanye kwifama? Lo ngumzekelo omhle wolu hlobo "lweendaba ongazisebenzisayo" kwii-satellites ezinjalo.
I-Satellites yeMimoya: Izixhobo zeSayensi
Kukho iindlela ezininzi ezinokubambisa iziganeko zomhlaba ezinceda abantu. Ukuba ungumlimi, mhlawumbi wasebenzisa enye yale data ukuze uncede ixesha lokutshala nokuvuna. Iinkampani zothutho zixhomekeke kwiedatha zezulu ukuze zihambise izithuthi zabo (iiplanethi, izitimela, iilori kunye neebhanji). Iinkampani zokuthumela, iinqwelo zokuhamba ngeenqanawa kunye neempahla zasemkhosini zixhomekeka ngokukodwa kwi-data yesimo sezulu ngenjongo yokuphepha kwabo. Uninzi lwabantu baseMhlabeni lithembele kwimozulu kunye neendawo zepatethi zendawo yokukhusela, ukhuseleko kunye nokuphila. Yonke into ukusuka kwimeko yemozulu yansuku zonke ukuya kwixesha elide lemozulu yinto yesonka kunye nebhotela zalabagadi bezandla.
Le mihla, iyisisitye esibalulekileyo ekulandeleni imiphumo yenguqu yemozulu eyenza ukuba izazinzulu ziqikelele njengamanqanaba e-carbon dioxide (CO 2 ) ukunyuka kwegesi emoyeni wethu. Ukwandisa, idilesi ye-satellite inikezela bonke abantu ukuba baphathe i-head-up kwixesha elide kwimeko yemozulu, kwaye apho bangalindela khona imiphumo emibi (izikhukhula, iiblizzard, ixesha elide lenkqantosi, iziqhwithi ezinamandla, kunye nemimandla yenkomfa).
Ukubona Iimpembelelo zeTshintsho kwemozulu kwi-Orbit
Njengokuba isimo sethu sezulu sitshintsha kwindlela yokuphendula kwiimveliso ze-carbon dioxide kunye nezinye i- gases zokushisa ziqhutyelwa emoyeni (oko kukubangela ukufudumala), ii-satellites ziba ngamangqina angaphambili kwizinto ezenzekayo. Banikela ubungqina obunzulu bokutshintsha kwemozulu kwiplanethi. Imifanekiso, njengaleyo eboniswe apha ngokulahlekelwa ngokukhawuleza kwamaqhwala kwiGlacier National Park eMontana naseCanada yile nkcukacha ephosakeleyo. Basitshela ngokukhangela oko kwenzekayo kwiindawo ezahlukeneyo eMhlabeni. I-NASA ye- Earth Observing System ineemifanekiso ezininzi zeeplanethi ezibonisa ubungqina bemiphumo yemozulu.
Ngokomzekelo, ukutshitshiswa kwamahlathi kubonakala kuma-satellites. Bangakwazi ukutshatyalaliswa kokufa kweentlobo zezityalo, ukusabalala kwezinambuzane (ezifana ne-pine beetle kwiindawo eziphazamisayo zentshona yeMntla yaseMerika), iziphumo zokungcola, ukuchithwa kwezikhukula kunye nemililo, kunye nemimandla eneenkomfa apho ezo ziganeko zenza umonakalo omkhulu. Kudla kuthiwa imifanekiso ixelela amagama amawaka; Kule meko, ubuchule bemozulu kunye nama-satellites okusingqongileyo ukubonelela ngolu hlobo olubonakalayo olubonakalayo luyinxalenye ebalulekileyo yeebhokisi zeetayibrari zisebenzisa iindaba zokutshintsha kwemozulu njengoko kwenzekayo .
Ukongeza kwimifanekiso, ama-satellites basebenzisa izixhobo ze-infrared ukuze bathathe ubushushu beeplanethi. Bangakwazi ukuthatha imifanekiso "ye-thermal" ukubonisa ukuba ziphi iiplanethi ezifudumele kunabanye, kuquka ukunyuka kwamaqondo olwandle olwandle. Ukufudumala kwehlabathi kubonakala ngathi kutshintshisa ama-winters , kwaye oku kubonakala kwi-space ngendlela yokunciphisa isithwathwa sekhephu kunye ne-ice cream yolwandle.
Ama-satellites amva sele exhotywe ngezixhobo ezivumela ukuba zilinganise iindawo zokuhlala ze-ammonia zomhlaba, umzekelo, abanye, njenge- Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) kunye ne- Orbiting Carbon Observatory (OCO-2) iinjongo ezijoliswe ekulinganiseni inani le-carbon dioxide yethu emoyeni.
Impembelelo yokufunda iSicwangciso sethu sePlanethi
I-NASA, njengomzekelo owodwa, inemibandela yezulu ehlola iplanethi yethu, ngaphezu kwe-orbiters (kunye namanye amazwe) agcina eMars, Venus, Jupiter, naseTaturn.
Iiplanethi zokufunda ziyingxenye yemishini ye-ejenti, njengokuba i-European Space Agency, i-China National Administration Administration, i-Japan National Aerospace Exploration Agency, iRoscosmos eRashiya kunye nezinye i-arhente. Uninzi amazwe anamaziko ase-oceanic kunye ne-atmospheric-e-US, ulawulo lwe-Atmospheric kunye ne-Oceanic lusebenza ngokuthe ngqo kunye ne-NASA ukubonelela ngexesha langempela kunye nexesha elide malunga nolwandle nolwandle. Abathengi be-NOAA zibandakanya amacandelo amaninzi oqoqosho, kunye nomkhosi, oxhomekeka kakhulu kwilo nkonzo njengoko kusebenza ukukhusela ulwandle lwaseMerika kunye nezulu. Ngoko ke, ngandlela-thile, imozulu kunye neendawo zepatethe ezisijikelezayo kwihlabathi jikelele zingabancedi abantu kuphela kumacandelo ezoshishino kunye namacandelo abo, kodwa bona, iinkcukacha abazibonelelayo, kunye nezenzululwazi ukuhlalutya nokubika idatha, zixhobo eziphambili kwicandelo likazwelonke ukhuseleko kumazwe amaninzi, kuquka ne-US
UkuFundisisa nokuQondwa komhlaba kuyingxenye yeSayensi yePlaneti
Isayensi yeplanethi yindawo ebalulekileyo yokufunda kwaye inxalenye yokuhlola kwethu i-solar system . Ibika kwingxelo yomhlaba kunye nomoya (nakwiimeko zomhlaba, elwandle). Ukufunda umhlaba akufani nakwezinye iindlela ngokufunda ezinye iihlabathi. Iingcali zenzululwazi zijolise kuMhlaba ukuba ziqonde iinkqubo zayo njengoko zifunda iMars okanye iVenus ukuze ziqonde ukuba ziphi ihlabathi. Ngokuqinisekileyo, izifundo ezisemgangathweni zibalulekile, kodwa umbono ovela kwi-orbit awuxabanga. Inika "umfanekiso omkhulu" wonke umntu oya kuwufuna njengoko sihamba ngeemeko ezitshintshayo emhlabeni.
I-Hertzsprung-Russell Diagram kunye neeMpilo zeNkwenkwezi
Ngaba Abasebenzi Bama-Antimatter Work Work?
Amacwecwe aSebenzayo kunye neKamva yeNkcitho yeNdawo
Iimpawu zee-Irish zaseNzululwazi kunye neMizekeliso
I-Flo Hyman - Enye yeyona nto i-Best of America
Ukuphononongwa: i-Michelin Latitude X-Ice Xi2
Yintoni i-Olam Ha Ba?
I-STCW Isinyathelo ngeNqanaba leNqanaba
Ama-10 amaninzi amaRoma, amaCapeque Castles avela kwihlabathi
USt. Louis Cardinals All-Time Lineup